Fahasamihafana amin'ny daty lany daty sy ny tsara indrindra alohan'ny daty | Bezzia
Fahasamihafana amin'ny daty lany daty sy ny tsara indrindra alohan'ny daty
Maria vazquez | 07/09/2021 12:00 | lakozia
Misy tarehimarika mahagaga. Ny olona iray dia manary antonony 128 kilao isan-taona noho ny tsy fahafantarana azy talantalana sakafo iray, Fantatrao ve izany? Misy ireo izay, rehefa manokatra vata fampangatsiahana sy mahita yaourt lany daty, dia hanary azy avy hatrany ka mieritreritra fa tsy azo antoka ny fanjifana azy. Saingy tena izany tokoa?
Ny tsy fahalalana dia misy fiantraikany amin'ny fisian'ny lehibe iray fako sakafo azo sorohina izany. ny olana ara-tsosialy, toekarena ary tontolo iainana izay nampiroborobo ny fampiasana ny daty fanjifana nisaina ho solon'ny daty lany daty amin'ny sakafo sasany. Fa inona no mahasamihafa azy?
Azonay antoka fa hainao tsara ireo teny roa ireo, fa efa zatra nitady azy ireo amin'ny vokatra namenoanao ny kalesinao ianao, saingy mazava ny fahasamihafana misy amin'ireo teny roa ireo? Fantatrao ve ny loza mety hitranga na tsia amin'ny tsy fanajana ireo daty ireo? Ao Bezzia izahay dia manandrana manafoana ny fisalasalanao rehetra anio.
1 Daty lany daty
2 Tsara indrindra alohan'ny daty
3 Fepetran'ny fiarovana
Daty lany daty
Ny daty lany daty dia daty iheverana ny sakafo ho tsy azo antoka. Ity daty ity dia mihatra amin'ny sakafo mety ho simba amin'ny microbiolojika ary, noho izany, dia mety hiteraka loza ateraky ny fahasalaman'ny olombelona aorian'ny fotoana fohy.
Ny vokatra rehetra mety ahiana mikraoba tsy maintsy mitondra ny daty lany daty izy ireo. Izy io dia aseho ho "daty fahataperana" isaky ny ampahany fonosana ary ampiarahina amin'ny daty tenany (andro, volana ary taona), na amin'ny alàlan'ny firesahana ny toerana nanondroana ny daty.
Hatramin'ny vanim-potoana lany andro dia takatra, noho izany ny sakafo dia tsy maintsy esorina na ariana hialana amin'ny fanapoizinana ara-tsakafo mety hitranga. Ahoana raha toa tsara ny sakafo? Na dia toa tsara aza izany, microbiologically dia mety hampidi-doza amin'ny fahasalamana izany, ary tsy ho afaka hamantatra izany ara-nofo isika.
Tsara indrindra alohan'ny daty
Ny daty fanjifana ankafizin'ny sakafo dia manondro ny daty mandra-pahatongan'ny vokatra mitazona ny sakafo mahavelona azy rehetra. Raha vantany vao tapitra io daty io dia mety hamoy ny fananana sasany amin'ny organoleptika toy ny tsiro, ny hanitra na ny volony ny sakafo, saingy hijanona ho azo antoka ho an'ny mpanjifa izy io raha mbola hajaina ny fitehirizana.
Ny marika "tsara indrindra alohan'ny faran'ny ..." na "tsara indrindra alohan'ny ..." noho izany dia manondro fahafaha-manao betsaka kokoa noho ny "daty fahataperana". Moa ve ireo vokatra izay nandalo ny tsara indrindra talohan'ny daty azo lany avy eo? Ny tolo-kevitry ny maso ivoho Espaniôla momba ny fiarovana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo dia manolo-kevitra alohan'ny handaniana azy ireo hanamarinana aloha fa simba ny kaontenera sakafo ary avy eo jereo raha tsara ny sakafo, fofona ary matsiro. Raha izany dia azo levona soa aman-tsara.
Mbola amidy ve ny vokatra aorian'ny tsara indrindra alohan'ny daty? Tsia. Ny daty fanjifana aleony dia mametra ny vanim-potoana fivarotana ny vokatra, dia toy izany koa nesorina tamin'ny toeran'ny varotra.
Ny voalaza etsy ambony dia manana hafanana ihany raha hajaina ny fepetra fitehirizana sy ny fampiasana sakafo, ary koa ny daty fanjifàna raha vao nosokafana ilay kaontenera. Ny fanajana ireo fepetra voalaza hatrany amin'ny vokatra ireo dia tena ilaina mba hiantohana ny fiarovana ny sakafo manokana. Raha tsy manao an'izany izy, ary na inona na inona daty ialany faran'ny daty na ny fanjifana tombony dia mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fahasalamanao ny sakafo resahina.
Tsy ny vokatra rehetra no takiana mba hitondra famantarana momba ny fanjifana tiany na ny daty fahataperan'izy ireo. Anisan'izy ireo isika mahita ireo vokatra izay kasaina mandritra ny fotoana fohy ny fanjifana azy ary miharihary ny fahasimbana kely, toy ny tranga voankazo, ary ireo vokatra manana fiainana talantalana lava be misy toetra mampiavaka ny fiarovana azy ireo manokana, toy ny vinaingitra. Ny zava-pisotro misy alikaola, fivarotan-mofo sy legioma, voankazo ary legioma no isan'ireo vondrona sakafo lehibe indrindra amin'ity sokajy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » lakozia » Fahasamihafana amin'ny daty lany daty sy ny tsara indrindra alohan'ny daty
'La Casa de Papel 5': Ny fahombiazan'ny Netflix
Cookies amandy misy famenoana sôkôla